जब बेहुलाकी आमाले विवाहकै दिन थाहा पाइन बेहुली आफ्नै छोरी भनेर...अनि भयो यस्तो निर्णय!
जब बेहुलाकी आमाले विवाहकै दिन थाहा पाइन बेहुली आफ्नै छोरी भनेर…अनि भयो यस्तो निर्णय!
चीनमा विवाहको क्रममा यस्तो अनौठो घटना प्राप्त भएको छ । जुन सपनामा कसैले सोचे पनि थिएन। विवाहको क्रममा जब दुलहाकी आमाले उनकी बुहारीलाई देखिन, तब उनको होश उडियो। यति मात्र होइन, दुलहाकी आमाले दुलहीलाई समात्छिन् र ठूलो स्वरले कराउन थालिन्। यो हुन सक्दैन।
वास्तवमा, विवाह गरिरहेका यी जोडीहरू आफैंमा दाजुभाइ र दिदीबहिनी थिए। दुलहाको आमाले दुलहीको हातमा जन्म चिन्ह देखेपछि यो कुरा थाहा भएको थियो। हातमा दाग देखेपछि ति महिलाले आफ्नी छोरीलाई तुरुन्त चिनिन् । रिपोर्टका अनुसार यो घटना चीनको जिआनग्सू प्रान्तमा भएको हो ।
यो समाचार चीन मिडियामा पछिल्लो दिनहरूमा प्रचलित छ। केटीको हातमा दाग देखेर दुलहाकी आमाले उनका वर्तमान आमाबाबुको बारेमा सोधिन्। ती केटीका हालका अभिभावकहरूले भने कि उनीहरूले २० वर्ष अघि उनलाई धर्मपुत्री बनाएका थिए। तिनीहरूले यो केटी सडकको छेउमा सुतिरहेको अवस्थामा भेटेका थिए ।
यी सबै कुराको खुलासा पछि, केटीले आफ्नी आमालाई समातेर रुन थालिन् र उनलाई पाल्ने आमाबाबुको बारेमा पूर्ण जानकारी दिईन । यद्यपि अझ अचम्मको कुरा धेरै कुरा थाहा पाए पनि विवाहमा कुनैपनि रोकावट लगाइएको थिएन। किनकि दुलहालाई पनि धर्मपुत्र बनाइएको थियो र दुलहीको वास्तविक आमाले यो विवाह गर्न रोकिनन्।
भनिन्छ कि ‘भाग्य धेरै अनौठोको खेल हो ।’ चीनको यो घटना पनि यस्तै छ। स्थानीय मिडियाका अनुसार २० बर्ष अघि दुलही हराएकी थिइन्। उनलाई खोज्न निकै प्रयास गरे। कहिँ पाउन नसकेपछि खोज्न छोडीदिएको थिए । विवाहमा उपस्थित सबै जना यस घटनाको बारेमा थाहापाएर धेरै भावुक भए र विवाहमा उपस्थित मानिसहरूले दुलहा र दुलहीलाई आशीर्वाद दिए।
प्रकाशित : शुक्रबार, बैशाख २४, २०७८१४:५७
विकसित देशमै यस्तो थियो स्कुल बस? कहाँबाट भयो पहेलो बसको शुरुवात? जानेर पर्नुहुनेछ छक्क!